Pôrtô Rikô: Diabe Hanoherana Ny Fantsom-pitaterana Solika · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Tita Beaven
Voadika ny 03 Marsa 2012 14:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Italiano, Français, বাংলা, македонски, 日本語, Aymara, Español
An-jatony ireo olona manerana ny nosy iray manontolo no nandray anjara tamin'ilay “Diabe Nasionaly: Mijoro manohitra mafy ny Fantsom-pitaterana Solika i Pôrtô Rikô” izay notanterahana ny Alahady 19 Febroary 2012, tany an-tanànan'i San Juan, renivohitri’ Pôrtô Rikô. Nizotra avy any amin'ny Capitol (Mpanao lalàna) ka hatrany amin'ny Lapan'ireo Governora (La Fortaleza) ireo mpanao fihetsiketsehana ho fandàvana ilay antsoina hoe “Fomba Maitso,” tetikasa natolotry ny fitantanan'ny governora Luis Fortuño, izay mikasa hanangana fantsona manana halàva 92 miles mba hitaterana solika avy any amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy mankany San Juan, any amin'ny morontsiraka avaratra, mamakivaky ireo tangoron-tendrombohitra ao afovoany.
Nokarakarain'ilay fikambanambe Casa Pueblo [en] mipetraka any amin'ny vohitr'i Adjuntas io diabe io. Nitarika ireo fikasàna hanakana ilay antsoina hoe “Fomba Maitso” ny Casa Pueblo. Niteny ireo mpiaro ny tontolo iainana fa, raha mitohy io tetikasa io, hanana fiantraikany ratsy eo amin'ireo rano any ambanin'ny tany sy ireo ala misy azy izany, hitarika fahasimbana tsy azo amboarina intsony eo amin'ny firindran'ny zavaboarin'ny nosy. Ireo fikambanana malaza eny ifotony sy ny vahoaka manohitra ny fanamboarana io fantsom-pitaterana solika io dia niantso izany ho “Fantson'ny Fahafatesana.”
Mizara sary vitsivitsy izay nalainy nandritra io fihetsiketsehana io ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny sary Ricardo Alcaraz. Teo ambany famelany avokoa ny namoahana ireo sary rehetra ireo.
Nandray anjara tamin'io fihetsiketsehana io ny vahoaka avy any amin'ireo sehatry ny fiaraha-monina sivily rehetra.
Nandeha avy any amin'ny Capitol ka nankany amin'ny Fortaleza ireo mpanao fihetsiketsehana. Mahita ny lafiny andrefan'ny Trano Olaimpika ianao ao aoriana, foiben-toeran'ny komity ny Olaimpika nasionaly.
Nitaraina ireo sehatra samihafa fa mety hitarika fahasimbana goavana eo amin'ny zavaboahary ao amin'ny nosy io tetikasa io. Karazana zavaboahary maro tandindomin-doza no miaina ao amin'ny làlan'io fantsom-pitaterana solika natolotra io.
Nandray anjara tamin'io fihetsiketsehana io ihany koa ilay mpikambana ao amin'ny Kôngresy Luis Gutiérrez.
Nisy hetsika maro natao nandritra io diabe io.
Rakotry ny sainam-pirenenan'i Pôrtô Rikô
Tsy nisy hetsi-panoherana vanona tany Pôrtô Rikô raha tsy teo ny "la plena", ilay kapoka amponga tiana indrindra rehefa misy ireo fihetsiketsehana.